မတ်မတ်ဗိုက်တွေအတွက် သတိထားရမဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် အပိုင်း (၂) | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Jul 13, 2019 Last updated Jan 18, 2020
– “ကိုယ်ဝန်သည်တွေကလေ ကိုယ်ဝန်ကို အခွင့်ရေးယူပြီးစားချင်တာတွေ ဇွတ်မစားသင့်ဘူး.. Victoria Secret model Miranda Kerr ကိုသိတယ်ဟုတ်?? Snap chat founder ရဲ့ အမျိုးသမီးလေ သူဆို ခုဒုတိယကလေးလေးမွေးခားတာ.. သူကိုယ်ဝန်တစ်လျှောက်ဘာတွေ စားတယ်ဘယ်လိုတွေ ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာ Vogue တို့ Harper Bazar magazine တွေမှာ share ထားပေးတာလေးတွေရှိတယ်..”
– “မမလဲ ဗြိတိန်မင်းသား Harry ရဲ့ အမျိုးသမီ းMegan ကိုသတိထားမိတယ်.. Megan ရောပဲလေ ကလေးသာမွေးလိုက်တာ ဗိုက်ကသတ်သတ် body လေးကသတ်သတ်ပဲ ဒါမျိုးတော့ ဒီနိုင်ငံမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်အေ..”
– “အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ ဘာလို့ကိုယ့်ဘာကို limit တွေထား ကန့်သတ်ချက်တွေ ထားလိုက်ကြတာလဲလို့.. သူတို့တောင်လှနိုင်သေးရင် ကိုယ်တွေလဲလှနိုင်ရမှာပေါ့။”
– “လှချင်တာပဲရှိတာ.. ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မှန်းမှမသိတာ..”
– “လောရန်ကော.. ပြောပြမယ်လေ.. ဒီညီမလေးတစ်ယောက်လုံးရှိနေတာကို..
ပထမဆုံး ကိုယ့်စိတ်အလိုလိုက်ပြီး စားချင်သောက်ချင်နေတာတွေကို ထိန်းချုပ်ရမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုထဲက မိခင်ရောကလေးအတွက် အာဟာရလုံလောက်ဖို့ လိုအပ်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲရှိသမျှ ဇွတ်စားလို့တော့ မရဘူးပေါ့။ Miranda ပြောထားတာက သူဆိုရင် မနက်စာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝစားတယ်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ အစားစာစားတယ်..
ဒီမှာထပ်ရှင်းပြချင်တာက သန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာ လမ်းဘေးစာ မစားတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူူး၊ စားအုန်းဆီ၊ အချိုမှုန့်ဆားတွေ အများကြီးပါတာ၊ အရသာရှိအောင် ဓာတုပစ္စည်းတွေ အများကြီးထည့်ထားတဲ့ အစားစာတွေ၊ တာရှည်ခံပစ္စည်းတွေ ဆိုးဆေးတွေမပါတာကို ပြောတာပါ။
ဆိုရင် ဂျုံကြမ်းပေါင်မုန့်၊ ဆန်လုံးညိုတွေ စားပေးသင့်တယ်၊ နောက်ပေါင်မုန့်ကို ထောပတ်တွေ၊ mayonnaise တွေစားမဲ့အစား ထောပတ်သီးကို သုတ်စားပေးလို့ရတယ်၊ နောက်ဆီပြန်ဟင်းတွေ အရမ်းမစားသင့်ဘူး.. fresh and light ဖြစ်တာလေးတွေ ပြောင်းစားသင့်တယ်..
အချိုရည်တွေ gas ပါတဲ့ soda တွေအစား သစ်သီးဖျော်ရည်၊ အုန်းရည်၊ ဒိန်ချဉ်တွေ များများစားပေးရမယ်တဲ့..
၃ နပ်လုံး ပြည့်အင့်နေအောင် မစားပဲ နဲနဲနဲ့ ခဏခဏစားပေးပါတဲ့..”
– “နောက်ရှိသေးတယ်မမရေ.. ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးပျက်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ရော မိသားစုကပါ ပေးမလှုပ်တာမျိုးတွေ ရှိတယ်လေ”
– “အဲ့ဒါလဲမှားတယ်.. မမွေးခင်ထိကို ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ပေးရမယ်၊ gym ဆော့ အလေးမတာမျိုးထက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအနှေးပြေးတာ၊ လမ်းလျှောက်တာ၊ ယောဂဆော့တာမျိုးတွေ လုပ်ပေးရမှာ၊ အဲ့ဒါမှ သွေးလည်ပါတ်မှု ကောင်းပြီး မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေလဲ လောင်ကျွမ်းမယ်၊ အမေလည်း မွေးပြီးတာနဲ့ အလေးချိန် အရမ်းတိုးတာတွေ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့..”
– “မရှိဘူးမမရဲ့.. Youtube မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက် လေ့ကျင့်ခန်း video တွေရှိတယ်မမရေ.. လိုက်လုပ်လို့ရတယ်၊ လုပ်ရလဲလွယ်တယ်လေ..”
– “ကျေးဇူးပါ ငါ့ညီမလေးရယ်.. အချိန်မှီတွေ့တယ်ပဲ ပြောရမယ်.. မဟုတ်ရင် အမလဲ ကလေးတစ်ယောက် မွေးပြီးတာနဲ့ ပုံပျက်သွားလိုက်တာဆိုပြီး ပြောတဲ့ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုးစားနေရဦးမှာ..”
– “ဟုတ်တယ်.. တစ်သားမွေးတစ်သွေးဝလို့ အပြောမခံနဲ့.. တစ်သားမွေးတစ်သွေးလှပဲ.. နော်မမ”..
ကဲ မမဗိုက်ဗိုက်တို့ရော.. ဘယ်လိုလဲ??
” မတ်မတ်ဗိုက်တွေအတွက် သတိထားရမဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် အပိုင်း (၁) ဖတ်ရန် “